Oromo fi Oromiyya dhabamsisani angoon argatan booda nama gaafachisa???
H/Desalenyi morimi isaati dhiyyacha jiruu to’aachuuf wari Tigroota dubi itti fakkessfu jeecha itianaa M/Ministera Mukthar Kadir keenye jeechun isaan Uummataa Oromoo millona 50 gowwaa goodhani tufachuu isaanti. Waan nama arisu amoo Oromo ta’uu batan ilee Oromiyya keessa namoota dhalatani gudatanini Oromiyyan takalamtee kufuu isheeti. Namoon kun yerro darbee dadafin wal mari’atani hayyama OPDO malee wara ergama TPLF rawwataa turan Mukthari Kardir, Kuma Damekssa, Warqinhi Gabayoo, Aster Mamo faatu Oromiyya awala jira. Namoon kun ama ilee namoota Oromiyya akka yerro Tesfaye Ximoo sun TPLF jalati bultuu wara feedhandha.
Mukthar Kadir Perezdaanti Naannoo Oromiyya ta’ee akkan mudamuu Melese Zenawi ajeeja cimma dabarsee ilee Miseensoon OPDO feedhi Melesen ala Alemayoo Atamsa fillachun isaan kan isaan gugubee gartuun Mukthar Kadir, Azeb Mesfin, Alemu Simee, Warqine Gabayo fi Mohamad Alemudiin faa Alemayo Atomsa summi redioactive Nyachisan bara lama akka ini Hosptala cibsuu godhan. Waqayoo amo isaa hambisee wara isaa ajeesuuf kayee irrati murtii du’aa dabarsun isaa rajjii ta’ee jira. Muktar Kadir faa Alemayon du’uu hin oluu jeedhan Aster Mamo Perezdaanti Oromiyya goodhani Tigren akka kara ishee Oromiyya bulchuu qoopheessa turan, garuu Miseensoon OPDO Oromoo ta’aan Mudama Tigren Oromoof Muduu kana dura dhabacha jiru;
Oromiyya fi OPDOn kan takalaman haaraa utuu hin tanee Magala Nekemteti Walga’ii OPDO goodhamee bara 2001-2002 godhameen Kenyata 3 seera ittiin bulmataa OPDO jijirun lammin feedhe ilee miseensa OPDO ta’ee filatamuu ni danda’aa guyya jeedhamee kaseeti. Namoon yerro sun falman hanga Haraati Cininamani to’aannoo TPLF jala jiracha jiru. Maqa isaan dha’uun hin barbachisuu. Caaraa kanati fayadamun angoon oromiyya hunda dhunfatani samicha kan egalan Alemu Sime, Muktari Kadir, Habtamu Sisia,Tefaye Abebe, Sisayi Negashi, Adenechi Abebe, Werqinhi Gabayo, Aster Mamo, Zelalem Jemanh, kkf lafa gurguruu irra gara nama gurguruu fi Summi Nyachisani nama ajeesuti kan ce’aan ergsi kaaseti. Oromoon qunqulun OPDO keeesa gadi ari’amun kan dhufee ergsi booda.
Mukthar Kadir Ittina M/Ministera ta’uun Oromoo sobun ykn xiqeesun ala bu’aa hin qabuu. Muktar Kadiri, bakka Junedin Sadoo bu’uun ala waan dabalee hin qabuu yoo hirisee malee. Sababin isaa Junedin ilee Dandeeti Qaba Muktari amoo Dandeeti nama hin qabnee fi guyya tokko jirenya isaa keessati nama Oromiyyaf yaadee hin beekna dha. Hojiin Muktar Kadir, Namoota hojeetan duba adeeme Gimgama irrati yakkun angoo Haricatuu funananachuu, Hadha Mana isaa fi Sodota isaa 2 Hoji lobyti boobasee hojeechisun gubboo sasabuu. Hadhamana isaa jalati walda Xiniqoola ijaree Azeb Masfin fi hadhamanoota Ministerota hoji xinqolati bobasuu. Nami kun Gaafa Melese du’ee boo’iichan 1faa kan ba’eef Angoo kana argachuuf jeedhe ta’uu isaa saxilee ture, kana mirkaneefamee jira. Torbee darbe amoo maqa Oromiyyan Mana boolee dha fudhatee hayyama Oromiyya malee of jalachisuu jeecha Azeb Mesifnif keenun isaa Angoo kana bilicheefachuu akka ta’ee Gabasan Keenya Finfinnee guyyadhuma sun GPO gabasee ture. Haqi jiru kana.
Waluma Galati Jaldhuf, Makoo fi diini Oromiyya keessati gudatee hundi Oromiyya gurgura akka jirtu beekamadha. Miseensoon OPDO yaakaa fi salphina maqa OPDOn Oromoo irraa ga’aa jiru kana falmachuuf Oromoo ququlun wal ijartan TPLF fi BADN dura dhabachuu qabduu. Namoon Mursi OPDO keessa falmacha jiran diina kara lama TPLF(Tigray) fi BADN (Amhara) falmacha diina keessa Gantoota OPDO keessa jiran ilmman Habasha of irra facisaa jiru. Oromon OPDO akka Dhaabba Dabalee amoo gara gutachuuf samacha jiru malee waan Amhari fi Tigren Oromoo irrati hojeecha jiran hin beekan. Dhabba Dabalee utuu of hin baratiin Ittigafatama barnoota goochuun Egree Oromiyya baleesuudha. Ganda Tigry hunda keessati Barumsi Walga’ee, Kitaboolee Ijoolee Baratan hundafi walga’ee Manen Kitaba Ganda hunda fi Magaloota Hunda keessati haala amayan ijaraman Komputeran hundi isaan gutatamani tajajila keena yamuu jirani, Oromiyya keessa Menen barumsaa ga’aa kan hin qabnee, Kitaba tokko ijoolen 20 kan itti faydamtuu, fi Mani Kitaba fi Komputer maqan isaa iyuu kan hin beekamne ta’uu isaati. Haali Barumsa fayya Oromiyya gutuman gututi hirnfatamee jira.
Oromiyyan ni Bilisoomtii !!!!
Ijjoo Dubi GPO